WordBrain21.8.21 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.8.21 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး WordBrain 2
WordBrain2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဝှက်ထားသောစကားများရှာပါ, သူတို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းပွတ်ဆွဲလျက်, ပဟေဠိပြိုကျကြည့်ပါ။
ရိုးရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာသူဖြစ်ခြင်းကနေစူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုးကိုင်သူဖို့ရေးရာပဟေဠိများနှင့်ကြိုတင်မဲနှင့်အတူအဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်! အစားအသောက်ကနေအာကာသအထိ themes များနှင့်အတူအခက်အခဲများ၏တိုးပွားလာအဆငျ့, ထွက်ရှိပင်အပြင်းထန်ဆုံး Brainiacs စိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
* 100+ ထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်များ
Levels နဲ့လိမ် * 1130 ဦးနှောက်
ကျနော်တို့ကလွယ်ကူဖြစ်မသွားမယ့်ကတိပေးကြသည်မဟုတ်, သို့သော်သင်ပျော်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်, သင်၏ဦးနှောက်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မည်!
WordBrain2 မေတ္တာနဲ့ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားပျော်စရာယူဘယ်မှာ MAG Interactive မှ, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
250 ကျော်သန်းကစားသမားတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်ကို join နှင့် Ruzzle, နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးစိုးမှုသို့မဟုတ် Wordalot တူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဇယား-topping hit ဂိမ်းအချို့ထဲကအစစ်ဆေး!
ကျနော်တို့တကယ် https://www.facebook.com/wordbraingame နှင့်သင့်စိတ်ထဲပေါ်မယ့်အဘယ်သို့ဆိုသွားပါ, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတန်ဖိုးထား!
www.maginteractive.com မှာ MAG Interactive မှအကြောင်းပိုမို
ကောင်းသော Times သတင်းစာ!
WordBrain2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WordBrain2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
WordBrain2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
WordBrain2အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.77k 16.42M
WordBrain2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း WordBrain2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.8.21
ထုတ်လုပ်သူ MAG Interactive
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://maginteractive.com/MAG_Privacy.html
App Name: WordBrain 2
Release date: 2019-07-12 05:37:53
လက်မှတ် SHA1: FE:52:D1:F0:6C:21:86:C1:22:1B:16:40:DC:33:B7:DE:47:44:1F:88
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Daniel Hasselberg
အဖွဲ့အစည်း (O): MAG Interactive
WordBrain2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ